Hongrie : Mihetsika ho an’i Irana, ho an’ny rehetra, na oviana na oviana · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 28 Jolay 2009 6:31 GMT
Mety tsy dia nilamin-tsaina loatra ireo tany Hongrie tato anatin'ny herinandro vitsivitsy lasa izao satria fomba maro samihafa no nampiasan'ireo mponina ny fanaovana fihetsiketsehana ho fitaovana amin’ny demokrasia.
Ny 19 Jona, mpianatra Iranianina manodidina ny zato mianatra any Hungary no nanao fotoam-pahatsiarovana tanaty fahanginana tao amin'ny Kianjan'ny Mahery-fo tao Budapest, renivohitr'i Hongrie. Tamin'ny alalan'ny Facebook no nikarakarana ity fotoana ity. Ny hetsika faharoa, nataon’ireo Hongrois mpanohana, dia natao teo anoloan’ny Masoivoho Iranianina tao Budapest tamin’ny 21 Jona: nitondra ny anarana hoe Hetsika-Tselatra Maitso [Green Flashmob].
Ny hetsika fahatelo “ho an’ny demokrasia sy ny zon’olombelona” tany Iran dia natao tamin’ny 26 Jona, mbola teo anoloan’ny masoivoho Iranianina ihany. Ao amin’ny vohikala Lehet Más a Világ! (”Mety hiova [ho hafa] ny tontolo!”), Redjade dia nizara vaovao sy sary momba ny hetsi-panoherana tamin’ny 21 Jona ary nanoratra ity momba ny tamin’ny 26 Jona:
[…] Nisy fahasamihafany be tamin’ny fihetsiketsehana farany natao tamin’ny Alahady farany teo izay tsy nahitana polisy mihitsy. Tamin’ity tsy vitany hoe nisy sakana fotsiny (nindramina tamin’ny Parlemanta?) fa mbola nisy policy am-polony mahery niaraka tamina fiarana polisy efatra sy fiara 6 hafa. Nefa na dia izany aza ny fivoriana dia nizotra tamim-pirahalahiana sy am-pilaminana. Fa manontany tena aho raha vokatry ny tsindry alokin’ny polisy no nahatonga ny havitsian'ireo mpianatra nandray anjara. […]
Ireo mpampita vaovao ao Hongrie dia nilaza ny fihaonan’ny sekreteram-panjakana misahana ny raharaham-bahiny Gábor Iklódy sy ny masoivoho Iranianina Ali Reza Irvas, ka taorian’io no nanambaran’ny tompon’andraikitra ao Hongrie fa manana zo hanao fihetsiketsehana am-pilaminana ireo Iranianina mpanohitra ary i Hongrie dia mandinika akaiky ny sakantsakana napetraka tamin’ ireo fampitam-baovao any Iran.
Tamin’ny 21 Jona ihany koa, nisy hetsika iray hafa natao tany Budapest: ireo mpikambana sy ireo mpomba ny Antokon’ny alika manan-drambo roa [Two-Tailed Dog Party] (HUN) dia nanao Hetsika Goavana manohitra ireo zavatra rehetra tsy mitondra mankaiza. Ny Antokon’ny alika manan-drambo roa [Two-Tailed Dog Party] dia antoko politika hosoka fantatra amin’ny fitsikerany ny politika any Hongrie. Olona 200 ka hatramin’ny